Bagan - Myanmar Keyboard 14.1 Apk (Android 4.1.x - Jelly Bean) | APK Tools
Home » Apps » Lifestyle » Bagan - Myanmar Keyboard 14.1 Apk
Bagan - Myanmar Keyboard v14.1 Apk screenshots
The description Bagan - Myanmar Keyboard Apk
အကောင်းဆုံး မြန်မာကီးဘုတ် (ပုဂံကီးဘုတ်)
ပုဂံကီးဘုတ်သည် မြန်မာ Developer များ ရေးသားထားသော အကောင်းဆုံး မြန်မာကီးဘုတ် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစာ ရိုက်ရာတွင် ဇော်ဂျီ၊ ယူနီကုတ် နှစ်မျိုးလုံးကို အဆင်ပြေပြေ ရိုက်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားသော မြန်မာကီးဘုတ် ဖြစ်ပါသည်။ ဇော်ဂျီဖောင့် ဖြင့် စာရိုက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ယူနီကုတ်ဖောင့် ဖြင့် စာရိုက်ရာတွင်လည်းကောင်း လွယ်ကူလျှင်မြန် ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် မြန်မာကီးဘုတ်များတွင် ထိပ်တန်းဖြစ်သော၊ အသုံးပြုသူများပြားစွာရှိသော မြန်မာ ကီးဘုတ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစာရိုက်ရာတွင် အမြန်ဆုံး နှင့် အမှန်ကန်ဆုံး ရိုက်နှိပ်နိုင်ရန် ပုဂံကီးဘုတ်ကို အခုပဲ အခမဲ့ Install ပြုလုပ် အသုံးပြုလိုက်ပါ။ မြန်မာဇော်ဂျီ၊ မြန်မာယူနီကုတ် ကီးဘုတ် သာမက ရှမ်း၊ မွန် နှင့် ထိုင်း ကီးဘုတ်များကိုပါ ပုဂံကီးဘုတ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ကျနော်တို့ Bagan Keyboard Version အသစ်မှာ ပါတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ တစ်ချက်လောက် ဖတ်ကြည့်ရအောင်!
- ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ ယူနီကုဒ် ဖောင့်သွင်းထားလားဆိုတာကို Auto စစ်ပေးပြီး တစ်ခါတည်း Unicode Keyboard ပြောင်းလဲပေးတဲ့ Auto Font Detect & Keyboard Selection
- ယူနီကုဒ် လက်ကွက် Layout ၃ မျိုး စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတယ် (Bagan Style, သင်ပုန်းကြီး Style, Unicode Style) ကြိုက်တဲ့ Layout နဲ့ ရိုက် ထွက်တဲ့စာက Unicode Order နဲ့ ထွက်တယ်။
- Bagan Style က သဝေထိုးရှေ့ ရရစ်ရှေ့ ရိုက်တဲ့ ပုံစံ ၊ သင်ပုန်းကြီးက သဝေထိုးရှေ့ ရရစ်နောက် ရိုက်တဲ့ပုံစံ၊ Unicode Style က သဝေထိုးနောက် ရရစ်နောက်ရိုက်တဲ့ပုံစံ
- ကိုယ့်ဖုန်းထဲက သီချင်း၊ ဗီဒီယို၊ Contact တွေကို ဇော်ဂျီနဲ့ မှတ်ထားတယ်၊ ယူနီကုဒ်ပြောင်းချင်တဲ့ သူတွေအတွက် Bagan Keyboard Setting က Unicode Converter ဆိုတာ နှိပ်ပြီး အလွယ်လေးလုပ်လို့ရ (Backup အရင်ချပြီး သတိထားပြောင်းပါ။ ဇော်ဂျီ ပြန်ပြောင်းချင်ရင် ခက်လိမ့်မယ်)
- SMS တွေ ဖတ်လို့မရဖူးလား၊ ဖတ်ချင်တဲ့စာကို ဖိပြီး Copy ကူးလိုက်တာနဲ့ တစ်ခါတည်း Convert လုပ်ပြီးသား စာတွေကို မြင်ရလို့ အလွယ်လေး ဖတ်လို့ရ။
- Voice Typing လုပ်ချင်တာလား၊ Bagan Keyboard မှာ Google Voice Typing ရော Bagan Voice Typing (မြန်မာပြည်တွင်းထုတ် နည်းပညာ) နှစ်ခုလုံးရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငွေလဲနှုန်းတွေ၊ ရွှေဈေး၊ ကုန်ဈေးတွေကို အသံနဲ့ မေးလို့ရတဲ့ Bagan Voice Command။ လောလောဆယ် Partial Release ဖြစ်တဲ့အပြင် Beta အဖြစ်ထုတ်တာမို့ User အကုန် မရသေးပါဖူး နောက်ပိုင်း အကုန်ရမှာပါ။ သုံးတဲ့လူတွေက အရမ်းများတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း Release လုပ်နေတာပါ။
- ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ ယူနီကုဒ် ဖောင့်သာမှန်၊ ကျန်တာ ဘာမှ လုပ်စရာမလိုဖူး။ အလုပ်တွေ အကုန် Bagan Keyboard တစ်ခုနဲ့ တင်အကုန် အဆင်ပြေ။
ကဲ ယူနီကုဒ် အတွက်ရော ဇော်ဂျီအတွက်ပါ ပူစရာမလိုပဲ အလွယ်တကူ ရိုက်လို့ရတဲ့ ပုဂံကီးဘုတ်ရှိနေမှတော့ ဘာများလိုသေးလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသုံးအများဆုံး ပုဂံကီးဘုတ်!
Bagan - Myanmar Keyboard 14.1 APK Download BoxBack top
Bagan - Myanmar Keyboard 14.1 APK Download
File MD5 d76138cac5bd5ec13af29861db3c794a
Download apk32.69 MB
Bagan - Myanmar Keyboard 14.0 APK Download
File MD5 863d53484fc64846bceb3020d3374d21
Bagan - Myanmar Keyboard 13.3 APK Download
File MD5 84bf45769fc659957386d0edfe31bf1b
Bagan - Myanmar Keyboard 13.2 APK Download
File MD5 35aabe2bb37a82cd736213595f809a44
Bagan - Myanmar Keyboard 13.1 APK Download
Update on January 27, 2020
File MD5 759d84eb89cdfa6291a880122cc43cd8
Download apk68.31 MB
Bagan - Myanmar Keyboard 13.0 APK Download
File MD5 f8227952513fe36edbf519ffc7035814
Bagan - Myanmar Keyboard 12.5 APK Download
File MD5 a9ecd2d94c922e5d3230d7ebecde6dcc
Download apk68.06 MB
Bagan - Myanmar Keyboard 12.4 APK Download
File MD5 d5c1468372b1d7cf94df9a2dff2394ef
Download apk67.01 MB
Bagan - Myanmar Keyboard 12.3 APK Download
File MD5 a096c71af7e9ed595b15e74f61fafed6
Bagan - Myanmar Keyboard 12.2 APK Download
File MD5 b2744e1ad70ec177ebf67ea1fb9632ae
Download apk66.98 MB
10 recent comments of Bagan - Myanmar Keyboard APK
Khun Wann Too
In lest version I can't use voice commands, but I enjoy it alot. Can I use voice command in this version
I was using for more thanayear with activation code. It's crush now. Even i bought two more codes and tried, it's not working yet. Pls fix asap.
Jangma Brang Mai
Number is more difficult to press in this update. It is better stay in middle.
What happened to Unicode keyboard?although choose Unicode it show Zawgyi Still nobody attempt ? I post it on 17 March . I using pay version.
I like this keyboard.. it was so easy to use .... (but i can't change theme why?!?)
Mc G Fatt
Chit min aung
Han Zin Htike
Chit Thet Py
Wun Zinn - Myanmar Book Apk
မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha Baydin Apk
ေရႊနားဆင္ အသံသြင္းစာအုပ္ - Shwe Nar Sin Audio Book Apk
WZ Comic - ကာတြန္းစာအုပ္မ်ား Apk
Home City Apk
Lan Thit - Myanmar Job Finder Apk
Mingalar Cinemas Apk
Mizzima Daily Newspaper Apk
ထီ - (Myanmar Lottery) Apk
Myanmar keyboard: Myanmar Language Keyboard Apk
K keyboard - Myanmar Apk
TTKeyboard - Myanmar Keyboard Apk
MmYearX (from 1910 to 2030+) Apk
Make money - Earn Paypal cash Apk
Graph Messenger Apk
T6.1.1 - P7.8.1May 18,2020
Hypixel TN city map for MCPE Apk
Power Zuma 2017 Apk
Bagan - Myanmar Keyboard 14.1 permissions
Bagan - Myanmar Keyboard 14.0 permissions
Bagan - Myanmar Keyboard 13.3 permissions
Bagan - Myanmar Keyboard 13.2 permissions
Bagan - Myanmar Keyboard 13.1 permissions
Bagan - Myanmar Keyboard 13.0 permissions
Bagan - Myanmar Keyboard 12.5 permissions
Bagan - Myanmar Keyboard 12.4 permissions
Bagan - Myanmar Keyboard 12.3 permissions
Bagan - Myanmar Keyboard 12.2 permissions